Mucaaradka Suuriya oo sheegay inuu bilowday duullaanka Raqqa - BBC News Somali
Mucaaradka Suuriya oo sheegay inuu bilowday duullaanka Raqqa
Image caption Taliyeyaasha mucaaradku waxay rayidka ugu baaqeen in ay ka fogaadaan fadhiisimada Daacish
Dagaalyahanada uu Mareykanku taageero ee waqooyiga Suuriya ayaa sheegay inuu bilowday ololaha lagu qabsanayo magaalada Raqqa
Duullaanka lagu qaaday magaalada Raqqa, oo ah xarunta kooxda sheegata dowladda Islaamka ee dalka Suuriya, waxaa ka qayb gelaya ciidammo ka socda xoogagga dimoqraaddiga ah ee Suuriya, oo u badan dagaallamayaal Kurdiyiin ah oo Maraykanku taageerayo, iyadoo dayuuradihiisa dagaalku ay hawada ka daboolayaan.
Hawl galka waxaa loo bixiyay carada webiga Euphrates. Laakiin ka qayb galka xoogga leh ee Kurdiyiinta ayaa dhibaato ka taagan tahay. Raqqa waa magaalo Carbeed, inta badan waxaana jirta cabsi ah in dagaallamayaasha Kurdiyiintu ay dad Carab ah ka saareen magaalooyin kale oo ay qabsadeen.
Waxay kaloo arrintani ka caraysiisay dalka Turkey-ga, oo u arka dagaallamayaasha Kurdiyiinta Suuriya inay tahay ballaarin maleeshiyada Kurdiyiinta Turkeyga ee PKK, oo Turkeyga iyo reer galbeedkuba ay u arkaan inay yihiin argagixiso.
Taageerada Maraykanku siinayo Kurdiyiinta Suuriya waxay aad u xumaysay xiriirka kala dhexeeya dowladda Turkey-ga, Saas awgeed Turkey-gu waqti xaadirkan kama qayb gelayo hawl galka lagu qaadayo magaalada Raqqa, waxayna iskudeyi karayaan inay diidaan in Kurdiyiintu ay dhul ballaaran qabsadaan.
Maraykanku aad ayuu u doonayay inuu qaado duullaanka Raqqa isla waqtigii uu bilawday weerarka lagu hayo magaalada Mosul ee dalka Ciraaq, si dagaallamayaasha kooxda sheegata dowladda Islaamka looga horjoogsado inay dib ugu gurtaan dalka Suuriya. Laakiin tani waxay nqon doontaa mid ka sii adag xataa dagaalka Mosul.
Inkastoo dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka Suuriya ay ka soo wada horjeedaan kooxda sheegata dowladda Islaamka, haddana mid-mid ayay dhexdooda uga dagaallamayaan, marka 2aadna waddammo colaaddii iyaga ka dhexaysay halkaas ku dagaallamaya ayaa arrimaha sii murginaya.